Oziọma ụbọchị March 4, 2021 | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Ozi nke March 4, 2021
di Paolo Tescione - Machị 3, 2021
Oziọma nke Machị 4, 2021: Oge niile Lazarọs nọ n’okpuru ụlọ ya, maka ọgaranya ahụ enwere ohere ịzọpụta, mepee ụzọ, nyere Lazarọs aka, mana ugbu a ha abụọ anwụọla, ọnọdụ a aghọọla ihe a na-apụghị ịgbanwe agbanwe. A naghị ajụ Chineke ajụjụ ozugbo, mana ilu ahụ na-adọ anyị aka na ntị doro anya: ebere nke Chineke n'ebe anyị nọ jikọtara ya na ebere anyị nwere n'ebe onye agbata obi anyị nọ; mgbe nke a na-efu, ọbụlagodi na ahụghị oghere n'ime obi anyị mechiri emechi, ọ nweghị ike ịbanye. Ọ bụrụ na emegheghị m ọnụ ụzọ nke obi m nye ndị ogbenye, ọnụ ụzọ ahụ ka ga-emechi. Ọbụna nke Chukwu.Nke a dịkwa egwu. (Pope Francis, General Audience Ka 18, 2016)
Site n'akwụkwọ Jeremaya onye amụma Jer 17,5: 10-XNUMX Otú a ka Onye-nwe-ayi siri: «Onye anābu ọnu ka nwoke ahu bu nke tukwasiri obi na madu, tiye kwa nb supporta-aka-ya n’anu-aru, wezuga obi-ya n’ebe Onye-nwe-ayi nọ. Ọ ga-adị ka tamerisk na steppe; ọ gaghị ahụ ọbịbịa dị mma, ọ ga-ebi n’ebe kpọrọ nkụ n’ala ịkpa, n’ala nnu, ebe mmadụ na-agaghị ebi. Onye ihe nāgara nke-ọma ka nwoke ahu bu nke nātukwasi Jehova obi na Onyenwe anyị bụ ntụkwasị obi gị. Ọ dị ka osisi a kụrụ n'akụkụ iyi, ọ na-agbasa mgbọrọgwụ ya na nke ugbu a; ọ naghị atụ egwu mgbe okpomọkụ bịara, akwụkwọ ya na-adị ndụ ndụ, n’afọ nke ụkọ ọkọchị anaghị echegbu onwe ya, ọ naghị akwụsị ịmị mkpụrụ. Ọ dịghị ihe dị aghụghọ karịa obi ma ọ siri ike ịgwọ! Anie ekeme ndifiọk enye? Mu onwem, Onye-nwe, na-enyocha uche ma nwalee obi, inye onye ọ bụla dịka omume ya, dị ka mkpụrụ nke omume ya si dị ».
Ozi nke ụbọchị 4 Machị 2021 nke Saint Luke
Site na Oziọma dịka Luk siri kwuo Lk 16,19-31 N’oge ahụ, Jizọs gwara ndị Farisii, sị: «Ọ dị otu nwoke bara ọgaranya, onye na-eyi uwe na-acha odo odo na ezigbo eri linin, ma na-enyefe onwe ya kwa ụbọchị oriri pụrụ iche. Otu nwoke dara ogbenye, aha ya bụ Lazarọs, guzo n'ọnụ ụzọ ya, ọnya jupụtara na ya, ọ na-anụ ọkụ n'obi iri ihe si na tebụl ọgaranya ahụ daa; mana ọ bụ nkịta bịara raara ọnya ya. Otu ụbọchị, nwoke ahụ dara ogbenye nwụrụ, ndị mmụọ ozi kpọkwaara ya n’akụkụ Ebreham. Ọgaranya ahụ nwụkwara, e wee lie ya. Oguzo n’ime ala ozo n’etiti nkpagbu, o weliri anya ya hu Abraham n’ebe di anya, ma Lazaros no nso. Mbe ahu o tisiri nkpu ike, si, Nna Abraham, merem ebere, zite Lazarọs ka ọ detu ọnu-ọ̀nu nkpisi-aka-ya na miri, me kwa irem arum, n'ihi na ahurum ihe-ike nke-uku n'ire-ọku a. Ma Abraham zara, si, Nwam, cheta na na ndu i natara ihe gi, na Lazarọs ọjọ ya; ma ugbua n’ụzọ dị otu a na-akasi ya obi, mana ị nọ n’etiti mmekpa-ahụ.
Ọzọkwa, e hiwela nnukwu abis n'etiti anyị na gị: ndị chọrọ ịgafe gị agaghị enwe ike, ha enweghịkwa ike isi ebe ahụ ruo anyị. O we za, si, Nna, biko zilaga Lazarọs n'ulo nnam, n'ihi na enwewom umu-nne ise. Ọ na-adụ ha ọdụ nke ukwuu, ka ha ghara ịbịa kwa ebe mmekpa ahụ. Ma Abraham zara, sị: Ha nwere Moses na Ndị Amụma; gee ha ntị. O we za, si,,-è, Nna Abraham: kama ọ buru na onye ọ bula si na ndi nwuru anwu la, ha g .chighari. Abraham zara ya, si: O buru na ha egeghi nti n’okwu Moses na ndi amuma, a gaghi eme ka ha kwenye obuna ma onwere onye si na ndi nwuru anwu bilie.
Okwu nke Jisos: March 23, 2021 ekwuputaghi akwukwo (vidiyo)
Oziọma nke ụbọchị Machị 22, 2021, nkọwa
Oziọma nke Machị 21, 2021 na nkọwa pope
Ozi nke March 20, 2021
Oziọma nke Machị 19, 2021 na nkọwa pope
Ozi oma nke March 18, 2021 na nkowa nke Pope Francis
Ozi nke March 13, 2021